आज, ध्यान Rostov को बाल अस्पताल प्रस्तुत गरिनेछ। तपाईं यहाँ लागू गर्नु अघि तपाईंले ध्यान के गर्नुपर्छ? विशेषज्ञहरूले झैँ के हुन् र बेफाइदा यो चिकित्सा संस्था छ? गुणस्तरीय कसरी प्रयोग गरिएको छ? संस्था बारे धेरै समीक्षा गर्न यो सबै मद्दत बुझ्छु। तिनीहरूले अक्सर प्रत्येक अन्य काट्न। यो सामान्य हो। सबै पछि, अस्पताल प्रत्येक यसको अनुरोध राखे। र यति कोही यो अन्य नागरिक जबकि, केही रुचि वा त्यो क्षण अस्वीकार्य देखिन्छ। त्यसैले, तपाईं चिकित्सा स्थापना नकारात्मक यदि धेरै विभिन्न राय मा, सेवा घटिया छ भनेर सोच्न हुँदैन। यो केही बस सेवा रुचि छैन भन्ने हो। मुख्य कुरा - उपचार को परिणाम। उहाँले सन्तुष्ट छ भने, त्यसपछि तपाईं यो संस्थाले लागू गर्न डर हुन सक्दैन।
Rostov को बाल अस्पताल के हो? वास्तवमा, जवाफ छैन त सजिलो छ। आखिर, यस शहर मा, त्यहाँ छोराछोरीलाई सेवा दुईवटा क्षेत्रीय अस्पताल हो। अधिकांश मानिसहरू कि रुचि हो, राइफल मा के छ। त्यो छलफल गरिनेछ एक लाभ मा यो बारेमा।
कुनै पनि मामला मा, रोस्तोव-मा-डन मा छोराछोरीको क्षेत्रीय अस्पताल - एक ठूलो बहु-स्तर संस्थाहरु। तिनीहरूलाई शाखा धेरै मा, त्यहाँ पनि क्लिनिक छन्। यो मात्र होइन अस्पताल हेरविचार गर्न बच्चाहरु लिन, तर पनि एक चिकित्सा सुविधा मा एक रातमा रहन संग बच्चाको बसाइ बिना केही रोगहरु निदान गर्न अनुमति दिन्छ।
छ, मान्छे यहाँ multidisciplinary हेरविचार प्राप्त गर्न सक्छन्। र यो प्रसन्न। तपाईं एक विशेष रोग उपचार गर्न विभिन्न कार्यालय वा चिकित्सा सुविधा यात्रा गर्न आवश्यक छैन। मा सानो Rostov मा पेशेवरों र एक बाल अस्पताल को बुरा के हुन्? यो ठाउँ बासिन्दा बीच धेरै लोकप्रिय छ। तपाईं आमाबाबुको ध्यान के गर्नुपर्छ?
हामी पत्ता लगाउन सिफारिस पहिलो कुरा यो पालन गर्न हुनेछ जहाँ चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्न। यसलाई मा Rostov-मा-डन धेरै छोराछोरीको क्षेत्रीय अस्पताल छ भने गरिएको छ। यसको कार्यक्षमता र पनि सेवा द्वारा दुवै संस्थाहरू समान छन्। तदनुसार, आगंतुकों यी अस्पताल को समान समीक्षा छोड्नुहोस्। तर तिनीहरू कहाँ छन्?
Rostov मा क्षेत्रीय बाल अस्पताल को पहिलो ठेगाना - एक सडक राइफल प्रभाग 339, भवन 14 जहाँ तपाईं राम्रो मद्दत शहर र क्षेत्र सबै जवान मानिसहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यस उर्वर मा एक क्षेत्रीय अस्पताल पनि छ, घर 170. सामान्यतया, एजेन्सी झन् वयस्क रूपमा देखिन्छ। तर छोराछोरीको सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्। त्यसैले कहिलेकाहीं अस्पताल नर्सरी भनिन्छ।
धेरै आगंतुकों सडक कि खुसी छन् पैदल प्रभाग, 339 र अनुग्रहको नजिकै हो। व्यावहारिक सडक मार्फत। यो त्यहाँ कहाँ जाने कुनै महत्वपूर्ण फरक छ भन्ने हो। तर, पहिले नै उल्लेख रूपमा, नागरिकहरु को सबैभन्दा शूटिंग मा बच्चाहरु संग आउँदैछन्।
र कसरी तपाईं अध्ययन संस्थान गर्न मार्फत प्राप्त गर्न सक्छन्? सबैलाई आफ्नै फोन नम्बर छ। उहाँलाई अनुसार, आगंतुकों कल र संस्थाले बारेमा सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्, भन्छन्।
के संयोजन प्रयोग गर्ने? क्षेत्रीय बाल Psychoneurological अस्पताल (। सेन्ट उर्वर, मास्को) निम्न संख्या प्रदान गर्दछ:
यो पहिलो संयोजन प्रयोग गर्न, र त्यसपछि एक विशेष खण्ड सोध्न भन्दा राम्रो छ। नम्बर दिइएको किनभने - कसरी Rostov को क्षेत्रीय अस्पताल №1 कुराकानी गर्न छ। जसमा एक त्यहाँ छोराछोरीको विभाग हुन्छन्। विशेष मा, एक neuropsychiatric।
तर सबै छ। त्यहाँ पनि पैदल प्रभाग, 339. कसरी यहाँ मार्फत प्राप्त गर्न क्षेत्र मा Rostov मा एक बाल अस्पताल छ? केही फोन को लागि, यो सुविधा उपलब्ध छ? संयोजन प्रस्तावित गरिएको छ कि ती फरक हुनेछ। तपाईं शूटिंग मा अनुप्रयोगमा नम्बर कल गर्न सक्नुहुन्छ:
यो पहिलो संयोजन प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो रजिस्ट्री। तिनीहरूले आमाबाबुले भन्न रूपमा, दोस्रो नम्बर - टाउको चिकित्सक प्राप्त। यो संयोजन संग अस्पताल समस्याग्रस्त छ पुग्न। कल रजिस्ट्रीमा मा त गाह्रो छैन, तर कहिलेकाहीं तपाईं धेरै पटक दोहोर्याउन प्रयास गर्न आवश्यक छ। छैन पनि खुसी कारक, तर वास्तवमा रहन्छ - यो पहिले प्रस्तावित संख्या साँच्चै पूरा लागि। केही रुकावट संग, तर कसैले तिनीहरूलाई सुरक्षित छ। तसर्थ, यो सिर्फ गरिरहन सिफारिस गरिएको छ। त्यसपछि सजिलै एक विशेष अस्पताल पुग्न बारी।
अब यो अध्ययन स्वास्थ्य सुविधा कसरी सम्पर्क गर्न स्पष्ट छ। जो एक क्षेत्रीय बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन) सम्पर्क, अब जानिन्छ प्रदान गर्दछ। र यो प्रदान गर्दछ सेवाहरू कस्तो? हामी सुटिङ मा एक संस्थाले बारेमा कुरा गर्दै छन्। शुभ मा नै सटीक सेवाहरू छन्। र विभाग यस्तै छ। पूर्व को एक सहायक - केही पनि दोस्रो रेस्टुरेन्ट सुझाव। यो हल्का अक्सर क्षेत्रीय बाल Psychoneurological अस्पताल (सेन्ट। ग्रेस, रोस्तोव) देखिन्छ यो छ।
त्यसैले के सेवाहरू पैदल प्रभाग, 339 मा DSS मा आमाबाबु र छोराछोरीलाई प्राप्त गर्न सक्छन्? उपलब्ध कार्यालय बीच आवंटित:
दिन हेरविचार ;
तदनुसार, हरेक रोग तपाईं स्वास्थ्य हेरविचार सुविधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, अस्पतालले स्वागत र विश्लेषण को वितरण को लागि एक निदान प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउंड र कार्यालय छ।
निम्न छलफल यो एउटा संस्थाले सबै भन्दा टिप्पणी सङ्कलन छ सडक पैदल प्रभाग, 339. मा स्थापना मा principally केंद्रित। तिनीहरूले केही पक्षहरूमा भिन्न।
धेरै आमाबाबुले एक विशेष स्वास्थ्य हेरविचार सुविधा स्थिति को महत्व याद गर्नुहोस्। क्षेत्रीय बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन) क्षेत्रमा सबैभन्दा खराब समीक्षा प्राप्त गर्दैन।
आमाबाबुले संकेत कि अध्ययन संस्थाले मा, सबै रूपमा केही दावी खराब छैन। स्थिति साधारण अनुकूल। यो तातो stifling छ, तर त्यहाँ कुनै अन्य कमजोरीहरू छन्। त्यहाँ redecorating। सकेसम्म उपकरण अद्यावधिक गर्न प्रयास गर्दै। पुरानो मेडिकल उपकरणहरू कुनै, कि तर आनन्दित सक्दैन व्यावहारिक छन्।
तर एकै समयमा, केही भन्न रूपमा, त्यहाँ outpatient विभाग केही तनाव छ। यहाँ, स्थिति ठीक अन्य कुनै पनि राज्य छोराछोरीको क्लिनिक मा जस्तै हो - कसैले आफ्नो पालो प्राप्त गर्न को लागि कसैले चुपचाप प्रतीक्षा, swears। कुनै आश्चर्य। सामान्य मा, स्थिति कुनै आश्चर्य, बन्द-डाल छैन। हो, यहाँ निजी अस्पताल भन्दा झन् खराब छ। तर APP - सार्वजनिक संस्था, दैनिक मानिसहरूको ठूलो संख्या प्राप्त छ। त्यसैले स्थिति बिल्कुल निजी चिकित्सा केन्द्र मा जस्तै हो यहाँ कि आशा छैन।
Rostov-NA-डोनू धेरै आमाबाबुले मा डाक्टर बाल अस्पताल खुसी छन्। यो कुरा यहाँ काम ज्यादातर अनुभव र कर्मचारी शिक्षित छ। युवा व्यवसायीक हालसम्म पर्याप्त छैन।
यसलाई चिकित्सा संस्थाहरु को मुख्य कर्मचारी भनेर उल्लेख गरेको छ - उच्चतम श्रेणी डाक्टर र चिकित्सा विज्ञान को उम्मेदवार हो (तिनीहरूले लगभग हरेक विभाग मा, उदाहरणका लागि, बालचिकित्सा वा सर्जरी मा फेला)। निरन्तर, ताजा पाठ्यक्रम सुधार।
तर, केही विशेषज्ञहरु छैन उत्साहजनक छन्। धेरै आमाबाबुले कि डाक्टर कहिलेकाहीं स्वागत पनि अनुकूल छैन सुझाव। केही मानिन्छ प्रश्नहरूको जवाफ छैन। कसैले अशिष्ट हुन सक्छ। यो सबै साबित कुनै तरिका छ।
एक मान्छे - यो सिर्फ खातामा लिनुपर्छ कि हरेक डाक्टर। र त्यो पनि, खराब मुड वा थकान मा हुन सक्छ। को स्वागत मा यो चरम मित्रता हुनेछ किनभने। यो तयार हुनुपर्छ। मानव तत्व कुनै एक यो सुरक्षित छ, छैन रद्द गरिएको छ।
न्यानो स्वागत केही आमाबाबुले कमी को dissatisfaction बावजुद हेरविचार को गुणवत्ता अझै पनि राम्रो छ। कहिलेकाहीं त्यहाँ चिकित्सा त्रुटिहरू, तर असान्दर्भिक छन्। आमाहरु र बच्चाहरु को dads संकेत पक्कै मा, डाक्टर अतिरिक्त विश्लेषण धेरै सल्लाह दिन्छन् जब कि। यो दृष्टिकोण भावना को दुई प्रकार हुन्छ। एक हात मा, आमाबाबुले डाक्टर यसलाई सुरक्षित प्ले र जाँच सबै 100% निर्णय भनेर खुसी छन्। अन्य मा - यो खर्च एक अतिरिक्त समय छ। दिइएको परीक्षण पारित गर्न लाइनहरू मा बस्न पनि छैन चाहन्छु।
बच्चाहरु orthodontists लागि आफ्नो काम (Rostov क्षेत्रीय अस्पताल) संग राम्रो तरिकाले सामना। आमाबाबुले यी विशेषज्ञहरु प्रत्येक बच्चा एउटा व्यक्तिगत दृष्टिकोण खोज्न प्रयास गर्दै भन्ने तथ्यलाई जोड। साथै तिनीहरूले तुरुन्तै खानको सँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मद्दत। पनि विकार डाक्टर को प्रारम्भिक चरणमा मा तिनीहरूलाई आमाबाबुले सुझाव र उपयुक्त उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
अन्य के विशेष गरी विशिष्ट कर्मचारी प्रदान गर्दछ बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन)? मनोवैज्ञानिक ओल्गा, लगभग सबै pediatricians र ophthalmologists ओल्गा। यी विशेषज्ञहरु अक्सर, समीक्षा मा सबै भन्दा राम्रो डाक्टर रूपमा APP Rostov को आमाबाबुले देखिन्छन्। ध्यान दिएर, उत्तरदायी, स्पष्ट आफ्नो सामान थाहा छ। तर, अन्य डाक्टर कुशलतापूर्वक काम गर्दै छन्। तर तिनीहरूले यति धेरै जोड थियो।
Polyclinic बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन - संस्था दिइएको छ जसमा शहर) विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई यहाँ अस्पताल उपचार गर्न आफ्नो बच्चा पठाउनु अघि आमाबाबुले उपचार गरिएको छ।
तथ्यलाई रजिस्ट्रीमा कुनै लाइनहरू धेरै बिन्दु। यो वास्तवमा प्रसन्न। तर एकै समयमा डाक्टर संग एक नियुक्ति धेरै समस्याग्रस्त छ बनाउन। केही पङ्क्तिमा लिन। त्यसैले यो एक डाक्टर को स्वागत को सुरु गर्नु अघि केही घण्टा लागि क्लिनिक आउन आवश्यक पहिल्यै छ। यो वास्तवमा केही निराशा छ, तर यो यस्तै स्थिति सबै राज्य संस्थाहरू अवलोकन छ उल्लेख गरेको छ। यो केवल इच्छित दिन भर्ना सुरक्षित गर्ने बारे चिन्ता गर्न अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
रजिस्ट्री त गाह्रो छैन, धेरै राय अनुसार, कल गर्न। आखिर, रिसेप्शन डेस्क मा काम जिम्मेवार र सक्रिय कर्मचारी। र तिनीहरूले आगंतुकों को आगमन सामना गर्न र सबै फोन कल जवाफ व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
Hospitalization पनि ध्यान आवश्यक छ। के अवस्था प्रस्ताव Oblast बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन)? तपाईं पहिलो स्थानमा ध्यान के गर्नुपर्छ? त्यहाँ सेवा सन्तुष्ट एक अस्पतालमा कुनै पनि आमाबाबुले हुनुहुन्छ?
यो कि छैन मा थप्न को उपचार गर्न समग्र जोखिम पनि खराब उल्लेख गरेको छ। तर उत्कृष्ट सेवा को धेरै गर्न पर्याप्त छैन। आमाबाबुले तिनीहरूले आफ्नै कोठामा धुन छ के आफ्नो dissatisfaction व्यक्त गरेका छन्। सामान्य अस्पताल सफाई अनुसूचीमा बाहिर छ। तर तपाईं सफाई पूरा गर्न अतिरिक्त स्थान आवश्यक छ भने, यो आमाबाबुको लागि हुनेछ। केही त्यस्तो दृष्टिकोण भ्रमित छैन। वास्तवमा, धेरै अस्पताल मा एक समान अवस्था ठाउँ लिइरहेको छ। तिमी अगाडी बाहिर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो आमाबाबुले बनाउँछ। र पूर्ण आफ्नै खर्च मा। केही पनि एक कर्तव्य रोष्टर संगठित।
क्षेत्रीय बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन) मिश्रित समीक्षा हुन्छ। तर धेरै भुक्तानी Chambers उपस्थिति खुसी एकै समयमा। पैसा को लागि बच्चा गर्नेछन् या डबल, वा एकल कोठा। तर यो अतिरिक्त सफाई आफ्नै पूरा गर्न आवश्यक छ।
साथै, केही छैन भनेर अस्पताल मा बच्चाहरु आधुनिक ग्याजेटहरू प्रयोग गर्न सक्दैन तथ्यलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। कुनै ट्याब्लेट, फोन वा ल्यापटप। कुरा यो राज्य पर्याप्त छैन मा महत्वपूर्ण, तर सुखद छैन। आफ्नो खाली समय मा, गर्न छोराछोरीलाई शाब्दिक केही लागि उपचार। तर यो अध्ययन अन्तर्गत एक चिकित्सा सुविधा चिकित्सा उपचार इन्कार गर्न एउटा कारण छैन।
छोराछोरीको पैदल प्रभाग मा Rostov को अस्पताल, 339 अस्पतालमा उपचार बच्चाहरु को पोषण स्थिति सन्दर्भमा धेरै टिप्पणीहरू प्राप्त भयो। खाना एक चिकित्सा सुविधा सेवा छ भन्ने तथ्यलाई गर्न सबैभन्दा बिन्दु छैन भन्दा स्वादिष्ट छ।
अस्पतालमा वास्तवमा खाद्य आहार प्रस्तुत। यो भन्दा सही सबै अनुसन्धान र विश्लेषण पूरा अनुमति दिन्छ जो एउटा सम्पूर्ण, जस्तै रगत कुनै नकारात्मक प्रभाव र शरीर छ। तथापि, सबैलाई कि ल्याउँछ स्वाद गर्न सक्छन्। यो प्रश्न मामिला गर्दैन वा सशुल्क विभाग मुक्त गर्न।
आफ्नै खाना ल्याउन दिनुभयो। तर आमाबाबुले स्वीकृत उत्पादनहरु को यो सूची अघि जान्नु आवश्यक छ। यो बच्चा मा उपस्थित जो रोग, निर्भर हुनेछ। कुनै हानिकारक नाश्ता र crisps - एउटा कुरा निश्चित छ। तसर्थ, अक्सर आमाबाबुले जोड जो पोषण समस्या, सजिलै हल गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा बच्चाहरु भोकभोकै पर्छन् छैन।
के निष्कर्ष हामी सक्छौं? बाल अस्पताल (Rostov-मा-डन) र यसको सम्बद्ध (जस्तै, सडक उर्वर मा) - यो एक एकदम ठूलो राज्य संस्थाले प्रकार छ। यो सहायता र शुल्क लागि, र नि: शुल्क प्रदान गर्दछ। सामान्य मा, आमाबाबुले उपचार को नतिजा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँ केही नकारात्मक पक्षहरू छन्, तर कसैले तिनीहरूलाई सुरक्षित छ।
बाह्य, अस्पताल चिटिक्क देखिन्छ। त्यहाँ कस्मेटिक मरम्मत, उपकरण जब सम्भव अद्यावधिक गरिएको छ। एक अस्पतालमा, तपाईंले आफ्नो बच्चा घर खाना, तर केवल एक निश्चित प्रकार खुवाउन सक्छ।
तपाईं नि: शुल्क र गुणस्तर उपचार प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले अनुप्रयोग Rostov-मा-डन सम्पर्क गर्नुपर्छ। अस्पताल मा स्थित आमाबाबुले क्लीनिक को सेवाहरू प्रयोग गर्न जाँदैछन् जो, लामबद्ध आफ्नो स्थान बारे अग्रिम हेरविचार गर्नुपर्छ। डाक्टर प्राप्त गर्न यो देखिन्छ रूपमा सजिलो छैन। विशेष गरी यो विशेषज्ञहरु आउँदा। पर्यटकहरू ठूलो प्रवाह, त्यसैले तपाईं अग्रिम बुक गर्न, वा विशेष कार्यालय आफ्नो पालो लिन प्रारम्भिक बिहान आवश्यक छ।
सामान्य मा, रोस्तोव थप्न नकारात्मक धेरै कारण छैन। तर तपाईं चाँडै एक विशेष छोराछोरीको रोगहरु सन्दर्भमा परामर्श प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो राम्रो यहाँ जाने छैन। आखिर, भन्नुभयो गरिएको छ रूपमा, सेवा गति लागि डिजाइन गरिएको छैन। यो स्थान सरकार एजेन्सीको साँच्चै राम्रो छ। यो महत्त्वपूर्ण वृद्धि सान्त्वना निम्ति उपयुक्त छैन। यस्तो उद्देश्यका लागि, यो निजी क्लिनिक जान सिफारिस गरिएको छ। कसरी राम्रो यो संस्थाले? यो एक जानकारी को परीक्षा को आधार मा आफूलाई लागि निर्णय छ। अब यो स्पष्ट छ के Rostov-मा-डन शहर को बाल अस्पताल।
योनी suppositories - राख्नु कसरी?
चरण नुस्खा, पकाउने सुझाव एक चरण: फ्रेंच मासु संग ओवन मा आलु
होटल Majestic Nha Trang3* (भियतनाम, Nyanchang): फोटो र समीक्षा
Bee Propolis। यो अनूठा पदार्थ केले निको पार्छ?